Mormii Sudaan keessaa (suuraa faayilii)
Deggertoonni dimokraasii kanneen Sudaan keessaa, fonqolcha mootummaa mormuuf jecha mormii guyyoota lamaa fi hokkara hoji dhaabinsaa geggeessanii jiran. Hirmaannaan hiriirichaas sababaa tajaajilli interneetii fi bilbilaa addaan citeef murtaa’aa ture. Ebla bara 2019 prezidaant al Bashiriin aangoo irraa kan darbe hookkara uummataa kan hoogganan koreewwan mormii naannoo fi waldaan ogeessota Sudaan aangoo waraanaa sana garagalchuuf hiriira sana qopheessan.
Uummanni Dilbata kaleessa magaalaalee kaartuum keessa hiriiree jira, garuu hagas baay’ee akka hin ta’in jiraattonni dubbataniiru. Miseensonni waldaa barsiistotaa akka jedhanitti humnoonni naga eegumsaa mormii uummati biilsa ministrii barnootaa kan Kaartuum fuullee taa’ee dhageessisaa ture dhaabsisuuf gaazii imimmaansu fayyadaman. Namoonni 87 ta’an illee to’annaa jala ooluu waldichi beeksisee jira.
Ganda Burrii jedhamu kan kaartuumii fi naannoo laga Ombada kan Omdurmaan keessatti illee mormii geggeessame bittinneessuuf poolisiin gaazii imimmaansu fayyadamuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Magaalaalee kan akka Medani, Nyala fi Atbaraa keessaas mootummaa nannoo keessatti kanneen Bashiriif amanamoo ta’an deebisanii muudamuu isaanii mormuun hiriira geggeessuu kanneen ijaan argan dubbataniiru.